Barnoota WordPress - Kutaa 1ffaa - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
WordPress jechuun moosaajii yookiin software madda banaa/open source tahee tola marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha. Marsariitilee xixxiqqoo irraa jalqabee hanga marsariitilee gurguddootti kan jirun hedduun isaanii yeroo ammaa wordpress dhaan kan hojjatamaniidha. Addunyaa saayiberii kana keessa kan jiran marsariitileen dhibbantaan 30 kan hojjatamaniin wordpress dhaan.
WordPress Eenyu faha itti fayyadama?
Dhaabbilee mootummaa irraa kaasee hamma dhaabbilee dhuunfaatti, manneen amantaa garaa garaa akkasumas namoonni dhuunfaa gara garaa WordPress tti ni fayyadamu. Sababni isaa wordpress n moosajii madda banaati. Kana jechuun namni kamuu itti fayyadamuuf kafaltii homaatuu kan hin barbaanne waan taheef.
WordPress maaliif filatama?
Wanti guddaan wordpress namoota heddu biratti filatamuuf madda banaa/open source waan taheef. Kana caalatti immoo nageenyi/security isaa heddu cimaa fi yeroo irraa gara yerootti haaromfamaa/update tahaa deemuu isaati. Inni biro immoo marsariitiin wordpress hojjatame tokko akka salphatti gara marsariitii filannoo barbaadametti geeddaruun waan danda’amuufiidha.
WordPress baruuf maaltu barbaachisa?
WordPress baruuf wantoonni nutti qabaachuu qabnu yookiin guuttachuu qabnu jennu kanneen armaan gaditti tarreessu kanneen.
Koompiitara: koompiitara qabaachuun hunda dura murteessaadha. Moobaayila keenya ammayyaawaa/smart-phone irrattis baruu dandeenya. Garuu immoo sirritti beekuufis tahee baruuf koompiitarri murteessaadha.
Web Server: WAMP, LAMP, MAMP,XAMPP
Web Browser: Google Chrome, Firefox, Opera fi kkf keessaa tokko
WordPress: https://www.wordpress.org/download irra deemuudhaan buufadhu
Wantoota armaan olitti isiniif tarreeffaman kanneen erga guuttattee wordpress baruun salphaadha. Barnoota WordPress nuti isiniif kennaa jirru keessatti moosajileen nuti dhimmi itti bahaa jirru, Xampp fi chrome dha. Isinis osoo jaratti fayyadamtanii jenna.
Barnoota wordpress keenya kutaa tokkoffaa kana keessatti akkaataa wordpress maashina keenya irratti fehuu dandeenyu wajjiin kan ilaalluudha. Akkaataa isaa viidiyoo keenya armaan gadii kana irraa baruu dandeessu. Subscribe gochuus hin dagatinaa!!
kutaa 1ffaa barnoota wordpress